पोस्टरहरू - Print Peppermint
घर / चिन्ह र पोस्टर / पोस्टरहरू
तपाईंको व्यवसाय, उत्पादन, वा घटना प्रमोट गर्न कस्टम पोस्टरहरू बनाउनुहोस्। ठूला र अतिरिक्त-ठूला आकारका साथ याद गर्नुहोस्। छोटो-रन र थोक उपलब्धि।
पूर्ण-रंग प्रिन्ट (१ वा २) साइड
हल्का कागज वा भारी कार्ड स्टक
आकार + वैकल्पिक माउन्टिंगको विविधता
ठूलो ढाँचा पोस्टरहरू
पोष्ट गरिएको पोष्टर्स
पोस्टरहरूसँग सम्बन्धित रोचक लेखहरू
T सुझावहरू उचित रूपमा पोस्टर प्रिन्ट गर्नुहोस्
हेडर छवि - स्रोत सबै टेक्नोलोजिकल प्रगतिहरूको साथ पनि, त्यहाँ यस्ता चीजहरू छन् जुन सान्दर्भिक हुन कहिल्यै रोक्दैन। यस अवस्थामा, म पोष्टरको बारेमा कुरा गर्दै छु। त्यहाँ अझै पनी यो विधि प्रभावकारी बारे केही श doubts्का हुन सक्छ वा यदि अनलाइन विज्ञापनले खेल सदाको लागि परिवर्तन गरेको छ, तर वास्तविकतामा, पोस्टरको अझै पनि महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ,… थप पढ्नुहोस्
कसरी भित्तामा पोस्टर ह्या Hang गर्ने - वा पोस्टर
सहि पोस्टरहरू पूर्ण रूपमा कोठालाई ब्लान्ड र क्लिनिकलबाट निजीकृत र चरित्रको साथ फुर्स्याउन सक्छ। ब्यान्ड पोस्टरहरूको साथ संगीतमा उनीहरूको एक्लेक्टिक स्वाद देखाउन कसले मन पराउँदैन, वा भिन्टेज फिल्म पोस्टरको साथ आफ्नो सिनेमा सामर्थ्य लचिलो? समस्या यो हो, जब प्रायः सबैजनाले पोष्टर दुई वा दुईमा झुण्ड्याएको छ… थप पढ्नुहोस्
Re कारण किन तपाईंलाई ब्रान्डि forका लागि मुद्रित मार्केटिंग सामग्रीहरू आवश्यक पर्दछ
२०१ 2019 को शीर्ष विपणन प्रवृत्तिहरूमा फोर्ब्स लेखमा, रचनात्मकता एक प्रमुख प्रवृत्तिको रूपमा पहिचान गरियो। एक समयमा जब यस्तो देखिन्छ कि वेब मार्केटिंग र डिजिटल मार्ग अगाडि छ, रचनात्मक कम्पनीहरूले प्रिन्ट बाहिर भेट्टाइरहेका छन्। पृष्ठभूमि शोरको बिरूद्ध उभिनु भनेको तपाईंको मार्केटिंग रणनीतिको लागि सपनाको नतिजा हो। तपाईं ... थप पढ्नुहोस्
FAQs - पोस्टरहरू
कसरी पोस्टर फ्रेम गर्ने?
हामीले यो प्रश्न समय-समयमा पाउँछौं र इमानदार हुनको लागि हामी विशेषज्ञहरू बनाउँदैनौं तर हामीले केही उत्कृष्ट लेखहरू र ट्यूटोरियलहरू फेला पार्न केही समय लगाएका छौं किनभने कुकुरले हामीलाई हाम्रा ग्राहकहरूको लागि समाधान खोज्न मनपर्छ! एक लिखित सिंहावलोकन पहिलो लेख, डेन गार्डन ब्लगबाट, तपाईंलाई एक सिंहावलोकन दिन्छ ... थप पढ्नुहोस्
कसरी पोस्टरहरू कसरी ह्या ?्ग गर्ने?
हामी बुझ्छौं कि तपाईं व्यस्त मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले पोस्टरहरू झुण्ड्याउनका लागि हाम्रा मनपर्ने स्रोतहरू जम्मा गर्न थोरै समय बिताएका छौं। hangman खेलौं! ह्याङ्गम्यानले यो युट्युब भिडियोमा आफ्नो पोस्टरलाई अधिकतममा कसरी DIY झुण्ड्याउने भनेर देखाउँदै राम्रो काम गर्छ: विकी-विकिआज तपाईं कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अब यदि तपाइँका बच्चाहरु सुतिरहेका छन् र तपाइँ... थप पढ्नुहोस्
पावरपोइन्टमा पोस्टर कसरी बनाउने?
Jeebus को मायाको लागि, कृपया Microsoft PowerPoint प्रयोग नगर्नुहोस्। 2019 मा, तपाईंको पोस्टर डिजाइन लेआउट गर्न धेरै व्यावसायिक र सजिलो तरिकाहरू छन्। यदि तपाईंसँग पहुँच वा ज्ञान छैन भने, वा त्यो अनौठो कजिन जसले तपाईंलाई उद्योग मानक कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाउन सक्छ। Adobe सुइट, जस्तै फोटोशप, इलस्ट्रेटर, वा InDesign, त्यसपछि ... थप पढ्नुहोस्
कसरी पोस्टर बनाउने?
डिजाईन इट इट प्रिन्ट इट इट इट इट इट इन्टर्भ्युटियल आर्टिकल, कभर व्यक्तिगत कवहरू कभर गर्ने प्रत्येक मुख्य चरणहरूमा "तपाईंको पोस्टर फेरि महान् बनाउँनुहोस्!"
कसरी पोस्टर प्रिन्ट गर्ने?
विकल्प 1: घरमा पोस्टरहरू छाप्नुहोस् घरमा पोस्टरको रूपमा ठूला छविहरू छाप्ने सजिलो तरिका छ। यसलाई "टाइलिङ" भनिन्छ। Adobe Acrobat, अन्य सफ्टवेयर बीच, तपाईंलाई यो गर्न अनुमति दिन्छ। किनकि तिनीहरूले यस विषयमा पहिले नै उत्कृष्ट ट्यूटोरियल लेखेका छन्, म तपाईंको समय खेर फाल्ने छैन। (लेख पढ्नुहोस्) अब, त्यहाँ पक्कै पनि विकल्पहरू छन् ... थप पढ्नुहोस्
मानक पोष्टर आकार के हो?
ठिक छ, जब म हुर्किरहेको थिएँ र मेरी आमा र (3) साथीहरू भन्दा बढी मेरो ब्यान्ड हेर्न आउन खोज्दै थिएँ, हामी शहरलाई 11″ x 17″ पोस्टरहरूले प्लास्टर गर्दथ्यौं। मेरो अवलोकनद्वारा 11″ x 17″ पोस्टरहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा विभिन्न प्रकारका प्रचारका लागि पोस्टर साइजको उत्पादन हुन्। थप पढ्नुहोस्
के मलाई मेरो ठूला ढाँचा डिजाइन फाईलहरूको लागि रगत चाहिन्छ?
कोरोप्लास्ट, PVC, फोमकोर, कार म्याग्नेट, ब्यानर स्ट्यान्ड र ठूला पोस्टरहरू: हामीलाई चारै तिर 0.5 इन्च ब्लीड चाहिन्छ। यदि 24 इन्च बाइ 18 इन्चमा अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको फाइलको साइज 25 इन्च बाइ 19 इन्च हुनु पर्छ रगत बगाउन अनुमति दिन। लूज आउटडोर ब्यानरहरू, इनडोर ब्यानरहरू र क्यानभास ब्यानरहरू: हामी अनुरोध गर्दछौं कि रक्तपात नगर्नुहोस् वा… थप पढ्नुहोस्